IVirgo Sun Pisces Moon: Ubuntu obunobuchule - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana IVirgo Sun Pisces Moon: Ubuntu obunobuchule
IVirgo Sun Pisces Moon: Ubuntu obunobuchule
Abo baneLanga labo kwiVirgo kunye neNyanga yabo kwiPisces banokuqonda, bayanyamezelana kwaye banzulu kakhulu. Ubuchule babo be-intuition kunye nengqondo ayinakuthelekiswa nanto.
Banengqondo elungileyo yamanani kunye nengqiqo kodwa oku akuthethi ukuba abazukuzithemba ukuzingela kwabo. Ingathi bazalwe belumkile kwaye abadingi kuxelelwa ukuba mabenze ntoni.
I-Virgo Sun Pisces inyanga yokudibanisa ngokufutshane:
Iimpawu: Ziyanyamezelana, ziyabambelela kwaye ziyaxolelanisa
Izinto ezingalunganga: I-Messy, negativistic kunye ne-obnoxious
Iqabane eligqibeleleyo: Umntu oza kuma ngophuhliso lwabo
Ingcebiso: Kuya kufuneka bazame ukungakhathali xa bethembisa into.
Umdibaniso wabo yenye yeVirgo ekrelekrele, yokuhlalutya neyokukhetha kunye nePisces ebuthathaka kunye nenomdla. Aba bemi bendawo banokuqonda iintsingiselo ezinzulu kwaye bajongane nezona ngcamango zingabonakaliyo.
I-Virgo Sun Pisces Moon abantu baya kufumana impumelelo kuba banolwazi ngokwasengqondweni kwaye banememori elungileyo. Banomdla kwaye bayaphupha. Kodwa kunokwenzeka ukuba baya kutyekela ngakumbi ekucingeni kunokuba basebenzise.
Kusenokwenzeka ukuba babe ngamagcisa amakhulu afuna ukwazi ngazo zonke iimfihlakalo zeNdalo. Kulula kubo ukujongana ithiyori kunye nokwenza.
Kuba kukho umahluko kubuntu babo kunye nendlela abaphendula ngayo kwabanye, ukungazoli kuya kuba yinto eqhelekileyo kubo.
Banolungelelwano olukhulu phakathi kwengqondo kunye neentliziyo zabo, bekwazi ukujonga kunye nokufikelela kwisigqibo esifanelekileyo kwimeko nganye. Baqonda yonke into, kodwa abayi kuyeka ukugxeka.
indoda eyi-virgo kwiimpawu zothando
Inyaniso yokuba badidekile kwaye bayayazi indlela yokumamela iya kwenza abaninzi baxabise. Akufani nokuba ngabona baphathi babalaseleyo kunye nabalinganiswa abanamabhongo, kodwa ngokuqinisekileyo abalubaleki uxanduva.
Ayilulo uhlobo lwabo abanqwenela ukuba sembindini wokuqwalaselwa, ukanti bayathandwa kwaye ngabantu abanye bahlala bethembele kubo. Bahlala bedibana ngendlela evulekileyo. Kwaye banika abantu kanye njengokuba befumene.
Uninzi luya kukhula luxhomekeke kubo nakwindalo yabo elungileyo. Nokuba injani na imeko, aba bemi baya kuhlala bethembekile kwaye bazame ukuqonda kangangoko. Akukho nto iphikisanayo kuzo.
Ngamanye amaxesha babonakala benovelwano kweli hlabathi likhohlakeleyo. Kodwa akunakwenzeka ukuba badlule kwimilinganiselo yabo kunye nemigaqo, nokuba ubomi bunzima kanjani.
I-Virgo Sun Pisces yeNyanga yemveli iyayazi ngokwenene indlela yokuqinisekisa ngendlela efihlakeleyo. Babuthathaka kwaye banobuchule. Bafuna ukhuseleko kunye nobomi obutofotofo, ke baya kusebenza nzima. Kunzima kwabanye ukumelana nenqanaba labo lobunkunkqele kunye nokuzola.
Kufana nokuba zihlala ziseluxolweni ngaphakathi kuba zithethela phantsi kwaye zizidalwa ezithambileyo. Kusenokwenzeka ukuba amava abo obomi abafundise kuphela ukuba balungile kwaye babe nemfesane.
Abantu abathembekileyo njengabo bayaphumelela ebomini. Ukuba ndlongondlongo nokuba lukhuni ngekhe kubasebenzele aba bomthonyama. Ngabafundi abakhulu bobomi.
abantu abazalwe ngoJanuwari 8
Njengazo zonke iVirgos, zenza injongo yobomi ngomsebenzi wazo. Kwaye bazinikezela emsebenzini wabo ngokunyaniseka. Kodwa ngenxa yokuba bengenzi nto, kukho umngcipheko abayi kusebenzisa bonke amandla abo.
Nangona kunjalo abanakuze babe ndlongondlongo, ke le ndlela yokuthantamisa kuphela kwendlela yabo. Ukuba bafuna ukugcina uxolo lwengqondo kunye neendlela zabo, kufuneka bacamngce kwaye bacamngce.
Iindlela zokuphumla kunye neyoga ziya kuba zilungile. Kwakhona ukuqonda kokomoya. Ngenxa yokuba banomdla omkhulu kunye nombono, baya kwenza abaculi abakhulu. Ungayichazanga indlela abanokulungiselela ngayo abanye njengoogqirha, amagqwetha okanye oonontlalontle.
Ingcinga yabo eyomeleleyo kunye nobuchule bokufumana indlela ebonakalayo yokukhululwa kuba banesifo sobuchopho. Iya kuba lihlazo kubo ukuyeka iitalente zabo zonakalise. Kubalulekile ukuba bayonwaba amaxesha ngamaxesha.
Kananjalo bonwabile ngumsebenzi wabo. Ukuba akunjalo, baya kujika babe novalo kwaye badakumbe. Uninzi lwazo luyoyika ukuba amaphupha abo akasokuze azalisekiswe.
Bafuna indawo ezolileyo ukuze babe sempilweni ngokweemvakalelo. Kungenxa yokuba zithatha iimvakalelo zabanye abantu ngokulula kakhulu. Ukuba bazive bezinzile, bafuna indawo yokusebenza kunye nekhaya ekungekho mntu uphikisayo.
Zama ukusoloko uphucula
I-Virgo Sun Pisces abathandi beNyanga bahlala bejonge ukuphucula kwaye babonakale beqwalasele kakhulu. Oku kunokuba luncedo kubo emsebenzini, kodwa hayi kubudlelwane babo.
Umlingane wabo kufuneka aqonde ukuba benza kuphela iingcebiso zokunceda kwaye akufuneki bathathe izinto buqu. Abathethi ukwenzakalisa nangayiphi na indlela.
Ngaba amadoda angumona anomona kwaye anezinto
Eyona nto bayifunayo kukuba ngcono, bavelise ngakumbi kwaye mhlawumbi bakrelekrele. Kwaye bafuna oku nakwesinye isiqingatha sabo. Kungenzeka ukuba bayakhathazeka ngaphezu kwezinto ezimbi.
Abantu benyanga yePisces zizidalwa ezinomlingo. Yinto eqhelekileyo ukuba bangabikho ngaphandle kwebala kwaye balahleke kwihlabathi eliyintelekelelo. Ingakumbi xa ubomi bunzima kakhulu.
Bafuna iqabane ukubakhusela, kunye nesithandwa esibanika indawo eyoneleyo yokuphuhlisa. Ukuba baya kuba nale nto, baya kuba novelwano kwaye bazinikele ngokupheleleyo kulwalamano.
Aba bantu banemida ethile ekungekho mntu ufuna ukuyiwela kuba banokuphatha kwaye balawule nje ukuba ubudlelwane obuthile busekiwe.
Indoda yeVirgo Sun Pisces yeNyanga
Impembelelo yeNeptune kubomi beVirgo Sun Pisces Moon ’yenza le ndoda ibe nomfanekiso ngqondweni. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba zinokutshintshwa, awusoze ubone iiPisces zenyanga ezimbini ngokufanayo.
yintoni umhla we-15 weempawu zodiac
Ukuba ufuna ukumazi ngcono lo mfo, jonga usapho kunye nabahlobo bakhe. Unemvakalelo evakalayo kwaye uyayiqonda intlungu kabani. Yiyo loo nto engumlondolozi olungileyo. Ukungathethi ukuba ungowesifazana kuba iiPisces zinalo mgangatho.
Kodwa oku kunokumenza aphuhlise ubudlelwane obungaqhelekanga namanye amadoda kusapho lwakhe. Kunokuba nzima kakhulu kuye ukwamkela ezinye iinkunzi. Ngokulula akanakuma ubudoda obuninzi kwaye ufuna ukuba abanye babe nemfesane kunye nokukhathalela njengaye.
Kungenxa yoko le nto ezakuziva emhle kuphela xa enabafazi. Umama nodadewabo baya kuba ngabahlobo bakhe abasenyongweni. Kwaye uya kuphuma kunye namanenekazi amaninzi. Iimvakalelo zakhe zichaphazeleka kakhulu ngabanye abantu. Xa ekunye nabantu abomeleleyo, uya kuzabalazela ukufana.
Ngabo balahlekileyo, uya kuqala ukungazi ukuba ungubani kwaye ufuna ntoni. Abafazi abaninzi baya kumbona njengoCasanova. Kwaye kunokwenzeka ukuba banyanisile. Kodwa oku kuxhomekeke kuphela kwiimeko.
Kwimeko apho eneVenus kwiiAries okanye engathandwa kwaye angaxhaswa ngokwaneleyo, ngokuqinisekileyo uya kubaleka emva kwabanye abantu basetyhini. Ezothando nezinzulu, uya kuthembeka ukuba inenekazi lakhe liya kumthanda ngokwaneleyo.
Umfazi ogqibeleleyo kuye ubuthathaka kwaye kwangaxeshanye womelele. Kodwa kufuneka amazise ukuba ungaphakathi kuye kuba akenzi nto. Nangona kunjalo, akufuneki abe ndlongondlongo, okanye woyika. Konke kufanele ukuqala ngobuhlobo obusondeleyo.
Umfazi weVirgo Sun Pisces Moon
IVirgo Sun Pisces inyanga yomfazi iya kuziqhelanisa nayo nayiphi na imeko kunye nomntu. Ayongxaki kuye ukuba atshintshe xa kukho imfuneko. Unamandla kunendoda ecula ngokufanayo. Eli nenekazi leVirgo liyabona xa umntu ezama ukukhohlisa.
Eli bhinqa ngamanye amaxesha linokuba ngumntwana. Ubuthiyile ubundlobongela kunye nenkohlakalo ngaphezu kwayo nayiphi na into kuba unomphefumlo ontununtunu. Ngabantu abakhohlakeleyo, le ntombazana iziva ngathi lixhoba. Kungenxa yoko le nto kunokwenzeka ukuba angabinakho ukonwaba kakhulu esikolweni nabaxhaphazi abaninzi, njengomntwana. Akakhathazeki ukuxubana nabantu abafanelekileyo, nangona.
Ukuya kuthi ga kowona msebenzi wakhe ufanelekileyo, angangumpheki omkhulu, umgcini okanye umzobi. Kodwa akazukuba nethamsanqa elininzi ngothando. Ayinamsebenzi into yokuba unokubona ezingqondweni zabantu, usawela emadodeni angalunganga.
10/25 uphawu lweenkwenkwezi
Unokuphulukana kakhulu neemvakalelo zakhe zothando kangangokuba akazukuzibona iimpazamo kwiqabane lakhe. Kungenzeka ukuba unethemba lomtshato ongaze ufike. Ukungathethi nto abaninzi banokumkhohlisa kwaye bamfumane kuphela ngesondo.
Usenokuqonda ukuba umfana ufuna ukulala naye kuphela, kwaye uyakucinga ukuba uyenza kuba esothandweni. Kufana nokuba angaboni mahluko phakathi kweemvakalelo kunye nokwabelana ngesondo.
Kodwa kamsinya nje emva kokuba etshatile, unokuqiniseka ukuba uya kuba ngumfazi ongumzekelo. Ikhaya lakhe liza kuba mnandi kwaye licoceke kuba kulapho uziva ekhululekile khona. Njengomama, uya kugqibelela. Indoda ebomini bayo ifuna ukwazi ukuba ingonzakala ngokulula.
Umntu o-ethe-ethe uya kulungela eli nenekazi. Uyazinikezela, kodwa kunokwenzeka ukuba aqhathe, ngakumbi ukuba umntu uza kumtshayela asuse iinyawo zakhe kwaye anyanzelise ukuba naye.
Inyanga kwiPisces Inkcazo yoBuntu
Ukuhambelana kweVirgo kunye neempawu zelanga
IVirgo Soulmate: Ngubani uMlingane wabo woBomi bonke?
I-South Node kwiPisces: Impembelelo yoBuntu kunye noBomi
ILibra yoSuku lweHoroscope yomhla we-7 ka-Okthobha ngo-2021
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoJulayi 19
indlela yokuvula umntu wescorpio ngesondo
Uphawu lweZodiac ngoJulayi 3
Scorpio amadoda aneempawu zothando